ချစ်စွာသော မိန်းကလေးသို့ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ချစ်စွာသော မိန်းကလေးသို့	Posted by mm thinker on November 11, 2008
Posted in: Poem.	Tagged: Poem.	မျက်နှာလွှဲထားလည်း
စိတ်ထဲက ကြိတ် ကြေ ခိုက်
အိပ်ငိုက်တုန်း အချစ်က သိမ်းပိုက်သွားတယ်။
အိပ်ယာအထမှာ အချစ်က ပွင့်ဖူးလာတယ်။
ဇာတ်ဆရာက လိုက်ကာ မ လိုက်တော့
“မင်းကို ငါချစ်တယ် ထင်ရဲ့”တဲ့
← MOE (ခေါ်) ဝီကီမြန်မာနှင့် စပ်လျဉ်း၍	ယုံကြည်စရာမရှိ၊ အားကိုရာလည်း မရ →	0 comments on “ချစ်စွာသော မိန်းကလေးသို့”
flower on November 11, 2008 at 11:39 pm said:
sin dan lar on November 13, 2008 at 8:42 am said:
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ…ချစ်တဲ့အကြောင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကဗျာကို magazine တစ်ခုမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်…အဲဒီကဗျာလေးဖတ်တုံးကပြုံးမိသလိုပဲ ဒီကဗျာဖတ်တော့ရှက်ရှက်နဲ့ ချစ်ရေးဆိုရတဲ့ ကဗျာဆရာကို ပြုံးမိပါတယ်။